Ukudluliswa imiklomelo Vyacheslava Mihaylovicha Gordeeva kuzothatha ishidi ephrintiwe kanye nohlu ukusebenza kwezinhlangano ukusetha emincanyana ballet futhi ukusebenza - ezintathu. Umhlaba Ballet Star, umsunguli kanye nomqondisi we nkundla "Ballet Russian", uthisha kanye Umhleli womdanso yazo zonke imiklomelo, izihloko, imiklomelo kanye izihloko iwine yena, umsebenzi wakhe kanye ithalente.
Young futhi manje
Esikhathini ballet, Vyacheslav Gordeev labetibambile ngokuphelele. Indoda ubungqabavu esikhulu, wayehlale enza yayiyindlela uyilungu elisebenzayo emphakathini lesi sikhulu ngolaka. Emazwini akhe siqu, isimo esibi kakhulu kuye - "bayiphile". Uma kubalulekile liyasho ukuthi ubukeka Vyacheslav Gordeev nenhle, kufanelekile, Nomfutho emuhle nabo igama eliyisenzo elithi "bayiphile" ngokuphelele engahambelani.
Ebuntwaneni evamile umfana eMoscow
Vyacheslav Mikhailovich Born Agasti 3, 1948. Uyena Muscovite bomdabu. Abazali izinkanyezi ikusasa ballet emhlabeni sivikele ezweni lawo phakathi nempi ye 1941-1945. Ubaba Mikhail walimala nonina Lyubov, owesifazane abahlakaniphe kakhulu, kahle ngidlala izinsimbi zomculo ezihlukahlukene, isigijimi yokubuyiswa eJalimane wahlangana Berlin. Ngemva kwempi, abazali wasebenzela nehhovisi design, okuyinto iqoqa "Buran". Vyacheslav Gordeev umfana fuzz ft noh hujan ekhula futhi wafunda wonke ezemidlalo etholakalayo (football, volleyball, isibhakela, futhi kamuva - tennis kanye karate).
Kodwa lapho ngineminyaka eyishumi ubudala, wabona ukusakaza ithelevishini ballet "Romeo and Juliet" nge edume Galina Ulanova e indima isihloko. Ukusebenza uqobo, ukusakaza yayo ku-TV kwaba umcimbi obaluleke kakhulu ezweni. It kunqunywa isiphetho umfana izwele. Slava Gordeev yazihlanganisa amateur ballet studio ekilabhini "Red Okthoba". Kodwa umama ayengacabangi ngenkathi izigaba "soloist we Bolshoi Theatre," futhi wanquma ukuxhumanisa ikusasa ingane yabo nge profession ezithile ngokuqondile nangokusuka enhliziyweni besilisa.
Ingozi, okuyinto kunqunywa impilo esizayo
Ngemizamo umama womfana silalelisise Suvorov esikoleni lempi, ukuthola lapho kwakunzima kakhulu. Imibhalo eqoqwe, ingane ukugunda izinwele wakhe, futhi Vyacheslav Gordeyev nonina uyethatha ukuma e zemfundo ezidumile zemfundo. Bese isiphetho ungenela okwesibili. Ocingweni bebona isikhangiso ukuze transoms kuya Ballet School izingane abanamakhono abavela engu-12. Ngesicelo indodana yakhe ukuza bese uzama unina ngokuzumayo uyavuma, naphezu emgqeni kakhulu (sezindaweni ezintathu - abasebenzi 600). Vyacheslav Gordeev ukuthatha ngokushesha, futhi imibhalo kufolda bawile indlela. Empeleni, eye waphumelela oluvelele uma siqhathanisa nabanye abafundi, iminyaka embalwa edlule ukuqeqeshwa ayebhekwa umfundi engcono onamakhono kunabo. Lesi sikole Gordeyev kufika ngo-1960, wathola iziqu - ngo-1968. Washeshe wahileleka isigaba uthisha abanamakhono uPetru Pestova.
Nakuba umfundi esikoleni M. V Gordeyev namanje amanye amazwe. In Paris futhi eLondon, yena wasina ngokudlule de Deux (yezindlela eziyinhloko Ballet) kusukela ballet "Igagasi Lezinguquko Paris". Impumelelo kwaba ekhexisayo. "Boy Golden" - isidlaliso ukuthi Gordeyev wathola phesheya - iqeda elikulo, hhayi kuphela ngenxa suit zegolide: izethameli Western wayezazisa umdansi abasha.
Ngemva kokuthweswa iziqu kakade iziqu neyaziwayo angakhetha, ngawo ethiyetha tie isiphetho sabo. ukuphikelela kwalo, kuze kube ingxoxo owayenguNgqongqoshe Culture EA Furtsevoy, wamenywa ukuba okudalwe "Ballet Young" (ke uJesu wazalwa ubuso eSoviet ballet icala lasentshonalanga). Theatre. Stanislavsky futhi Nemirovich-Danchenko banikeza umculi osemusha izindima ngokushesha ehola nomholo ngenhla ruble 200. iphupho Liyaziswa we umdansi abasha - Grand Theatre - futhi wamfaka phakathi qembu lakhe, kodwa kuphela amabutho de ballet oholela ruble 98. Uthatha ngomdlandla ukhetho odlule. Ngemva kwesikhashana, Gordeyev waba soloist yaseshashalazini main wezwe futhi yakhonza khona kuze 1989. Ngangiprakthiza izindima BT Gordeyev eholwa Alekseya Varlamova.
Ngo-1971 Gordeyev baba owawina Zonke-Union Umncintiswano Ballet, futhi ngo-1973 efika ukuthi uzothatha indondo yegolide kanye umklomelo wokuqala eMoscow Sombimbi, lapho umnikazi we-Grand Prix iba Nadezhda Pavlová. Lo mncintiswano ubhekwa endaweni lokuzalwa duo abadumile - Nadezhda Pavlová futhi Vyacheslav Gordeyev. Ngalesi sikhathi soloist ezincani Bolshoi Theatre - liyinkanyezi neyaziwayo ballet Soviet, eyaziwa phesheya futhi caressed nguhulumeni. Nakuba izikhathi 5 waba anemikhawulo phesheya, njalo angenele noma amandla, noma ubambe, futhi Vyacheslav bethathwe dolobha zomhlaba inkampani yakhe.
namanje fuzz ft noh hujan
Vyacheslav Gordeev, empilweni yakho lapho ngaleso sikhathi igcwele ezinganekwaneni, akazange aphike lutho futhi akasoze nyama. Yena kwabalelwa ngokuphathelene inqwaba abayiziqumama zesifazane , ngisho abengameli kanye kuvinjelwe phesheya, kabili baba aphume emthanda abesifazane babezizwe. Mangisho ukuthi Gordeev esenamandla futhi emangalisayo kahle. Futhi ngenxa yokuthi lezi amakhono angokwemvelo futhi ngokuntula kwakhe uthando, futhi umsebenzi. Yena nabafundi bakhe ebonisa ukuthi, uma uyoba nawo amandla anele ukwenza lutho okuhle, akwanele, kudingeka enze isinqumo.
Nadezhda Pavlová futhi Vyacheslav Gordeyev eyaduma pair Soviet, nobemele isitayela Bolshoi Theatre 70s. Ngo-1975, "umfana osemqoka" futhi "isimangaliso intombazane" kokutjhada kwami, begodu ngo-1986 abahlukanisile. Kwakumelwe ephambi kwamehlo akho, futhi ngiphumelela kakhulu, ngakho abangele umona abamele eziningi Bolshoi Theatre qembu. Vyacheslav yena ukholelwa ukuthi uma umbhangqwana dancing ndawonye, umndeni kungcono ukuba ahlukaniswe: kanzima ngaso sonke isikhathi ukuba azungeze, udinga ukuthola lonke umsebenzi umndeni emsebenzini - kusukela emndenini. Bathi ukuthi umshado wabo wadalwa KGB wayedabuka ezikweletini.
umshado wesibili kanye kudalwa nkundla yakhe siqu
umshado wesibili Gordeeva futhi ziwile, nakuba eyathatha iminyaka engaphezu kwengu-20. Unkosikazi Maya kwaba Saidov (Rudenko), izingane ezimbili bazalelwa komshado. Gordeev Vyacheslav Mihaylovich - indoda ejabulayo. Zonke ukuthi kuthatha kwalokho akuthola. Isihloko Umculi Yabantu ye-USSR , wathola ngo-1984 eneminyaka engu-36 weminyaka. Theatre "Ballet Russian", yena edalwe esekelwe Ensemble "Ballet Classical", kuyaqapheleka kokubili kuleli kanye nasemazweni aphesheya, futhi ngo-2005 lapho yaseshashalazini kuvula Gordeev esikoleni-studio dance owayephila classical, okuyinto ethandwa kakhulu.
imiklomelo hola futhi izihloko
Gordeyev wathola imiklomelo kanye wokudansa njengendlela umqondisi futhi njengoba Umhleli womdanso. Ngo-1983 wathola iziqu Faculty of Journalism, futhi ngo-1987 - Umnyango choreographic GITIS, lapho kusukela ngo-1993 kuya ku-1998 kwaholela Yiqiniso Abahleli bomdanso Educationalists. Ngo-1992 yena waklonyeliswa isihloko "Kuhle Umhleli womdanso Yonyaka", ukhishwa yiNhlangano impresario Western Europe. Yena wayengumbulali iPhini Yedolobha YaseMoscow Duma (2007-2012). Ngaphezu kwalokho, Vyacheslav Mikhailovich - UProfesa Russian Academy lwesiSlavic Namasiko. Zonke imininingwane mayelana imiklomelo kanye izihloko we umdansi omkhulu ayatholakala kabanzi.
Ngemva kweminyaka engu-60 Vyacheslav Gordeev, ukuphila kwakhe siqu siguqule futhi, washada okwesithathu. Kulesi umshado lapho ayezalelwe futhi ekhula amadodana amabili. Akubuzwa, ukuthi uyajabula nomkakhe wamanje - wopiyano emangalisayo Oksana (iziqu honours kusukela eMoscow Conservatory). unkosikazi lokugcina Vyacheslav Gordeev ezingaphansi kuka umyeni wakhe iminyaka engu-26. Amadodana Nikita kanye noSasha waya kuyise - ngisho ubathola zibulawa ukuqina.
Abantu abalungile Russian
Ngamagama ungachithi Vyacheslav kuhlanganisa izakhiwo, okuyinto Gordeev V M. wahlanganyela ngempela ngempumelelo. Lendvodza okucindezela ukuba uthenge okuthile futhi nginenhlanhla. Ngaphezu kwalokho, kulo lonke elase-interview yakhe, yena muntu wathi sengqondo esibi futhi igcinwe ngisho ne Nureyev futhi Baryshnikov. Ngokuthakazelisayo, wavumelana akusho esekhala noma imuphi umsebenzi zasendle wama-KGB, nabacindezelwe ngaphansi kokubusa kweSoviet. Futhi lokho kuyinto ikakhulukazi endabeni ethile yenhlonipho indoda - yisakhamuzi yakhe. Gordeev V M. - a Patriot ngomqondo best of the izwi.
Patriot and umthandi ekuphileni
Uyabathanda ezweni lakhe futhi uthanda yemidlalo, naphezu amaphutha kwenziwa kulesi sikhungo impikiswano: kabili kuye ngaphandle kwesizathu usula izinkontileka. Mhlawumbe ngenxa yokuphila spoilt kuye, Vyacheslav Mikhailovich, ngokuvumelana ingxoxo yakhe - a nombono omuhle ngezinto ezinkulu kanye lover wokuphila.
Vyacheslav Gordeev, a-ballet i-owawungumnyaka injongo yokuphila kwakhe abazinikele kuye manje. Imizamo yakhe, "Ballet Russian" bephethe umsebenzi kwezemfundo, kuyinto qembu lochwepheshe kakhulu, ababebalelwa abantu abangaphezu kuka-100, elincomekayo isakhiwo Theater Kuzminki nokubuyekeza okukhulu.
Theatre "Globe". Novosibirsk intsha zezemfundo yaseshashalazini "Globus"
Konstantin Eremenko futhi bakhe "Legends Cup"
"Ibutho" - yokusetshenziswa zomuthi